Cheap CNC milling plastic parts factory na suppliers | Ouzhan
Ngwongwo plastik gunyere otutu ihe kwesiri ekwesi, naịlọn (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP ). Mgbe ị na-ahọrọ ihe maka eserese imepụta, a ga-ahọrọ plastik injinia kwesịrị ekwesị dabere na iji gburugburu ebe obibi na ihe ndị dabara adaba nke akụkụ akụkụ CNC.
Plastic CNC igwe-nkenke Plastic igwe Parts machining Center
Uru nke akụkụ Ouzhan Plastic
- Plastic nwere obere njupụta na ịdị arọ.
- High kpọmkwem ike na ikwesi olu ike.
- Ezi nguzogide kemịkal.
- Ezi mkpuchi eletriki.
- Ezigbo mbelata esemokwu, esemokwu esemokwu na ite mmanụ n’onwe.
- Ezi ịkpụzi na agba agba arụmọrụ.
- A iche iche nke anụ ahụ na chemical nchebe Njirimara.
- Ọ dịghị mfe ịnyefe okpomọkụ ma nwee arụmọrụ nchekwa ọkụ dị mma.
- Low n'ichepụta na-eri.
OEM ahaziri plastic-egwe ọka ọrụ-China Shanghai CNC plastic-egwe ọka akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, akụkụ CNC zuru oke na -emepụta akụkụ plastik nwere ogo siri ike ma nwee ntụkwasị obi enwere ike ịhazi ya. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke plastic-egwe ọka igwe akụkụ. Ke adianade do, na CNC milled plastic ngwaahịa nyere nditịm izute àgwà ụkpụrụ na ike ga-eji dị iche iche na ulo oru ngwa. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka plastic CNC-egwe ọka ngwaahịa na anyị kpọrọ ahịa.
Akụkụ nke akụkụ Ouzhan plastic milling
Ejiri ihe eji eme ihe eji eme ihe na igwe ihe eji eme ihe na CNC uzo abuo: ọla na injin plastik. Ọla gụnyere aluminom alloy, ígwè, ọla kọpa, dị iche iche siri ike alloys, wdg The nkịtị ihe na CNC igwe nhazi osisi ndị injinịa plastik e wezụga metal ihe, na plastic ihe nwere-apụghị ịgbanwe agbanwe mkpuchi ihe onwunwe nke metal.
Uru nke Ouzhan Plastic Milling Service
- All nkenke CNC milled plastic ngwaahịa bụ isiokwu siri ike mma nnyocha.
- OEM awara awara ọrụ nwere ike ijide n'aka na ị nwetara ngwaahịa ndị achọrọ, kwado DDP, CIF, FOB na ụzọ ịkwụ ụgwọ njem ndị ọzọ iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnata ngwongwo ahụ n'enweghị nsogbu.
- Dị ka Eserese ma ọ bụ n'omume maka nkenke plastic-egwe ọka akụkụ n'ichepụta.
Nke gara aga: OEM carbon ígwè-egwe ọka ulo oru machining akụkụ
Osote: CNC mbịne akụkụ